VLC DVD: Olee Ọkụ VLC faịlụ ka DVD (Windows 8 gụnyere)
VLC Player bụ a eluigwe na ala mgbasa ozi ọkpụkpọ na-arụ ihe fọrọ nke nta ọ bụla video format na ọbụna DVD. Ọ nwekwara ike enuba video dị ka TV na-egosi kpọmkwem site gụgharia nkesa. Ma i nwere ike na-amaghị na ọ bụ nakwa eru nke ngbanwe na nyopụta video faịlụ yana VLC ọba akwụkwọ ka DVD, nke mere na i nwere ike iji ya na gị video ọkpụkpọ. Ugbu a, anyị bụ ndị a na-enyere gị aka ọkụ DVD site VLC Player na nzọụkwụ site nzọụkwụ usoro. Otú ọ dị, ọ bụ obere bit siri ike na mgbagwoju anya usoro. Ya mere, anyị na-nwere ike ikwu ọzọ mfe na-eji DVD ọkụ ngwá ọrụ rụchaa otu ọrụ. Ugbu a, ka ina malitere:
Nkebi nke 1: Ọkụ VLC faịlụ ka DVD na VLC
Part 2: An mfe ụzọ Ọkụ VLC faịlụ ka DVD
Nzọụkwụ 1: Tinye faịlụ ka VLC
Mepee VLC. Wee pịa "Media", ma họrọ "Stream".
Gaa File taabụ na pịa "Tinye". Agagharị maka ihe nkiri na-aga. Họrọ nkiri na nri aha na ị chọrọ apa ọkụ.
Nzọụkwụ 2: Mee ntọala tupu ọkụ usoro
Ị nwere ike nwalee nkiri site na-ahọpụta "Play" site ndọpụta menu. Ọ bụrụ na ihe niile bụ ihe OK wee họrọ "Stream" site ndọpụta-esote "Play". I nwekwara ike ịgbakwunye ndepụta okwu ihe nkiri. Nke a sobtaitel ga-agbakwunyere na ihe nkiri ahụ.
Ego ma isi iyi nke nkiri ọkụ nke anyị tinye na mbụ. Wee pịa "Ekem".
Uncheck Ngosipụta nọ n'ógbè gị igbe na adị ọkụ usoro. Họrọ "File" site ndọpụta menu na pịa "Tinye".
Pịa agagharị iji họrọ ebe nchekwa. Họrọ gị DVD mbanye na-esure ihe nkiri na DVD. Pịnye a aha maka nkiri ị chọrọ ịzọpụta dị ka.
Ego igbe na-esote Ọrụ Transcoding. Wee họrọ profaịlụ maka ihe nkiri usoro. Video - H.264 + MP3 (MP4) na-atụ aro. Ị nwere ike hazie elu nhọrọ site na ịpị ngwaọrụ menu. Pịa ọzọ gaba ihe nzọụkwụ ọzọ.
Nzọụkwụ 3: Malite ọkụ usoro
Họrọ "All ụmụntakịrị iyi". Mgbe ahụ ego na "site iyi mmepụta eriri" mkparịta ụka igbe ma ọ bụrụ na ihe niile bụ ihe OK. Mgbe ahụ kụrụ "Stream".
Na-enwe ndidi. Na-ere ọkụ oge na-adabere na size nke nkiri na ide ọsọ nke gị DVD mbanye.
Ọ bụ ezie na VLC-enyere gị aka ọkụ faịlụ ka DVD, ị pụrụ ịhụ na ọ bụ ike na mgbagwoju anya. Ya mere, ebe anther siri ike DVD burner software - Wondershare Video Converter Ultimate na-atụ aro. Ọ na-enyere gị mfe ọkụ gị VLC faịlụ ka DVD na a pụtara DVD menu. Ugbu a, m ga-egosi gị otú ọkụ VLC faịlụ ka DVD nzọụkwụ site nzọụkwụ.
Nzọụkwụ 1: Ibu Ibu VLC videos ka DVD Ntụgharị
Mgbe DVD Creator a guzobere na kọmputa gị, na-emeghe ya na ihe bụ isi window, pịa "Tinye Files" button ịgbakwunye ebudatara VLC faịlụ na kọmputa, ma ọ bụ ikpuru na dobe videos ka ịgbakwunye VLC videos n'ime isi na windo. Na ekpe, ị nwere ike ịtọ àgwà na akụkụ ruru nke videos.
Atụmatụ: Ugboro abụọ pịa ọ bụla dị video Ka ịhụchalụ aka nri window.
Nzọụkwụ 2: Dezie videos na ịtọ video ikwu n'ụzọ
Ọ bụrụ na gị VLC faịlụ egwu zuru okè, i nwere ike ikwu a nzọụkwụ. Ma ọ bụrụ na e nwere flaws gị video, na-eji kemfe ngwaọrụ dezie ha. All isi edezi ngwaọrụ na-gụnyere. Pịa "Dezie" akara ọzọ na video aha ka malitere. Ị nwere ike akuku, bugharia, ewepụtụ gị video ma tinye ndepụta okwu ka VLC videos.
Nzọụkwụ 3: Họrọ a DVD menu na tọghata VLC ka DVD
Họrọ a DVD menu ma ọ bụ hazie ya dị ka ị chọrọ. Mgbe ntọala niile na-mere, pịa "Ọkụ" iji tọghata VLC faịlụ ka DVD ndị mara mma na DVD menu. Na a mfe VLC ka DVD burner, ị pụrụ ịnụ ụtọ VLC videos na ihe ọ bụla DVD ọkpụkpọ na ndị enyi gị.
> Resource> VLC> VLC DVD: Olee Ọkụ VLC faịlụ ka DVD (Windows 10 gụnyere)